Iprofayile yenkampani-Foshan Chengpai Sanitary Ware Co., Ltd. '
Yasekwa ngonyaka ka-2012, eli shishini ligxile ekuveliseni iintloko zeshawari eziphakathi neziphezulu, iintloko zeeshawari ze-shawari, iisuti zentloko zeshawari, iisuti zeshawari, iiphaneli zeshawari, iipompo, amagumbi okuhlamba, izixhobo zangasese, njl.
Inenkqubo yokuqinisekisa egubungela uphando kunye nophuhliso, ukuvelisa, ulawulo lomgangatho, kunye neenkonzo emva kokuthengisa.
Iimveliso zalo ikakhulu zithunyelwa eYurophu, e-US, mpuma Asia, kuMbindi Mpuma, njl ngelixa ishishini liye laba liqabane le-OEM kwiimveliso ezininzi ezicocekileyo ezicocekileyo.
Ukujolisa ekuveliseni iimveliso eziphakathi neziphezulu, ishishini libeka umgangatho phambi kobungakanani kwaye sele linikezelwe kuphuhliso lwexabiso lophawu oluzimeleyo ngenjongo yokuba yeyona nto ingcono kushishino olungenazintsimbi.
Ihlala izinikele ekwakheni izindlu zokuhlambela “ezintle, eziPhambili, eziNdawo eziSingqongileyo, ezisempilweni kwaye ezihlala ixesha elide” kwaye zinikezelwe kwabo bafuna ukuhlamba okumnandi kwaye bonwabele ubomi babo.Ngeemveliso zeChengpai, unokufumana imvula yesibhakabhaka esimnyama sokunciphisa ukudinwa kwakho kosuku nangayiphi na indlela oyithandayo. Yonwabela ishawa yaseChengpai emnandi nethandekayo kwaye uphumle kamnandi!
I-Chengpai inemigangatho engqongqo kakhulu yokukhetha izinto ezingafunekiyo. Zonke iipaneli zentsimbi ezingenazintsimbi zenziwe ngentsimbi engenasici engama-304 kwaye azinakhokelo, i-chromium, i-electroplated coating, into enetyhefu kunye nezinto ezingcolisayo. Isempilweni kwaye ayiyityhefu, iimveliso zayo zonga umbane kwaye ziyahlangabezana nemigangatho yokhuselo lokusingqongileyo kumazwe aseYurophu naseMelika.
Ngokusekwe kumgaqo wokusebenza kwengqibelelo kunye nokusebenzisana ngokuphumelela, uChengpai ungene kwiivenkile ezinkulu zaseTshayina nakwamanye amazwe. Iimveliso zayo zifumaneka eHamburg, eMilan, eLondon, eFlorida, eCanada, eFrance, eBelgium, eMiddle East, nakumazwe akumazantsi mpuma Asia.